Rosia : Ahariharin’Ireo Mpikatroka Mafana Fo Amin’ny Aterineto Ny Fiainan’Ilay Lehiben’ny Fonja Manone Baiko Hampijaly Ireo Voafonja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Novambra 2016 1:39 GMT
Dadin, izay voasazy telo taona nanomboka tamin'ny Desambra teo araka ny lalàna vaovao iray izay manameloka “ny famerenana ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fivoriam-bahoaka” araka ny didy an-tsoratra nalefa tany amin'ny mpisolovava azy sy ny vadiny. Tamin'ny 1 Novambra 2016, nozarain'ny haba-tranonkalam-baovao Rosiana tsy miankina, Meduza, ilay taratasy.
Efa nahazatra ireo izay namaky ny haisoratra fitsipiky ny GULAG tamin'ny faha-sovietika ity fitondra ny voafonja ity – isan'izany ireo mahazatra toy ny tangoronosy GULAG an'i Aleksandr Solzhenitsyn, ny tantaran'ny Kolyma an'i Varlam Shalamov, ary ny Misosa ny Zava-drehetra an'i Vasily Grossman, mampiseho amin'ny antsipirihiny ny fiainana ao amin'ny tobin'ny voafonja sovietika ny ankamaroan'izy ireny. Raha toa ny samizdat ( gazety tsy ara-dalàna vita printy sy aparitaka ) no nianteheran'ireo mponin'i URSS liana tamin'io resaka io mba hamakiana ireny tantara ireny, dia ny haino aman-jery sosialy kosa no nampiasain'ireo Rosiana mafana fo mba hizaràna ny vaovao tahaka ireny.
Hatramin'ny namoahana ny taratasin'i Dadin, dia nobitsihin'i Zdolnikov ny fampahafantarana momba an'i Major Kossiev, izay lazain'i Dadin fa mpiray tsikombakomba tamin'ny fampijaliana azy. Notarihiny ihany koa ny hafa ho any amin'ny pejy Vkontakte-n'i Kossiev :
Tantara an-jatony mitovy amin'ny an'i Ildar no hita amin'ny fikarohana malaky amin'ny Google. Inty, ohatra, taratasinà gadra iray voatàna tao amin'io toby famaizana io tamin'ny 2012. Mitovy tsy misy valaka amin'ny fampijaliana voasoratra ao amin'ny taratasin'i Ildar ny fampijaliana voatantara ao.
Tsy ampy 24 ora akory taorian'ny nanaparitahan'ny Meduza ny taratasin'i Dadin, dia toa efa misy fiantraikany sahady ilay hetsika. Nivory teo ivelan'ny biraon'ny Sampan-draharahan'ny Fonja Federalin'i Maosko ireo mpikatroka mafana fo sy ireo mpitolona mba hanao hetsika ho fanohanana an'i Dadin sy ho fanavaozana ny fonja.
Nasehon'ny fahitalavitra Rosiana REN TV ihany koa ny sarin'i Dadin izay voalaza fa nalaina ny marainan'ny androtr'io, tsy ahitàna dian-kapoka na marika fampijaliana. Nohamafisin'ny vadin'i Dadin, Anastasia Zotova, fa naratra ny vadiny tamin'ny tapaky ny volana Septambra, fa efa nikatona ny fery amin'izao fotoana izao.
Nampanantena ny mpiasan'ny Fonja Federaly fa avelany hijery ny voafonja ireo ” mpitsabo manam-pahaizana tsy miankina”, mba hanamafisana ny filazan'ny governemanta fa tsy nampijaliana ara-batana tsy ara-drariny izy.